Jeneraal Galaal oo Guriceel lagu aasay | KEYDMEDIA ONLINE
Jeneraal Galaal oo Guriceel lagu aasay
Allaha u naxariistee Jeneraal Maxamed Nuur Galaal ayaa caawa lagu aasay qabuuro ku yalla magaalada Guriceel.
GURICEEL, Soomaaliya - Meydka Marxuum Jeneraal Galaal, ayaa maanta salaadda Janaasada lagula tukada Masaajidka Isbaheysiga ee magaalada Muqdisho, galinkii danbe ee maanta ayaana laga dajiyay garoonka diyaaradaha ee degmada Guriceel.
Caawa fiidkii ayaa loo hooyay gurigiisii rasmiga ahaa, waxaana lagu aasay goobtii uu ka dardaarmay in lagu duugo marka uu geeriyoodo oo ah magaalada uu ku noolaa sanadihii lasoo dhaafay ee Guriceel.
AUN, aaska Jeneraal Galaal, waxaa ka qeyb galay, Wasiirro, iyo Xildhibaanno heer Fadaraal iyo Maamul Gobaleed, Maamulka magaalada, saraakiil ciidan, ehelada marxuumka iyo dad shacab ah oo aad u badan.
Guddoomiyaha degmada Guriceel, Anas Cabdi Macalin ayaa markii maydka la aasay kadib ku dhawaaqay in garoonka diyaaraha ee Guriceel loogu magac daray Marxuumka oo wixii hadda ka danbeeya loogu yeeri doono Jeneraal Galaal Airport.
Madaxda Galmudug ee ku sugan Dhuusamareeb ayaan ka qeyb galin aaska AUN, Jeneraal Galaal, sidoo kale Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble oo iyaguna Dhuusamareeb galabta gaaaray ayaa marxuumka u awoodi waayay in ay maydkiisa sagootiyaan.
Allaha u naxariistee dilka Jeneraal Maxamed Nuur Galaal, waxaa ka dhashay shaki weyn oo ku aaddan qaabka loo dilay, waxaana jira tuhun laga qabo in Al-Shabaabka gudaha ay meegeen dilka Marxuumka.